Puntland: Magaalada Bosaso oo siweyn looga xusay maalinta booliska Soomaaliyeed “SAWIRRO” | http://kismaayodaily.com
Magaalada Bosaso oo siweyn looga xusay maalinta booliska Soomaaliyeed “SAWIRRO”
Waxaa maanta kadhacday magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari munaasabad si heer sare loosoo agaasimay oo lagu maamuusayay sanadguuradii 69-aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed.
Madaxwaynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole, golihiisa wasiirada, saraakiisha booliska Puntland iyo kooxaha fanka ayaa kasoo qaybgalay munaasbaadda kadhacday magaalada Bosaso.
Madaxwaynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ka hadlay madasha ayaa sheegay booliska inay tahay sharaf, isagoo ka sheekeeyey taariiqdii iyo karaamadii ciidamada booliska Soomaaliyeed ay lahaayeen.
Waxaa uu sheegay booliska Soomaaliyeed inay ahayd wax aad loogu faano, waxaa uu kula dardaarmay dhalinyarada inay ku biiraan Booliska si’ ay uga shaqeeyaan nabadgalyada dalkooda.
“Askarta dadka ay dhaleen waxa ay ahaayeen jireen aqlaada iyo nidaamka dadka ugu wanaagsan, maadaama waalidkood ay ka baran jireen” ayuu yiri madaxwayne Faroole.
Wasiirka amniga Khaliif Ciise Mudan iyo saraakiil katirsan kuliyadda ciidanka booliska ee degmada Carmo ayaa dhamaantood booliska Soomaaliyeed meel kasta oo ay kusuganyihiin u diray hambalyada maalinta ciidanka booliska oo ku beegan maanta 20-ka Disember.
Xafladda ayaa kusoo idlaatay jawi dagan iyadoona intii ay socotay heeso wadaniyado u badan ay soo bandhigeen kooxda fanka ee Waaberi Puntland, taasi oo siweyn usoo jiidatay dadkii xafladda joogay.